लघुकथा : बदला « हातमा खबर-जहाँ तपाइँ, त्यहीं खबर
लघुकथा : बदला
प्रकाशित मिति : २०७८, २ भाद्र बुधबार १८:२१
वर्षा यामको समय थियो। पानी झमझम परिरहेको थियो। सुलोचना आफ्ना वृद्ध बाको जन्मदिन मनाउन माइती जाँदै थिइन् । माइती पुग्न केही समय लाग्ने भए पनि उनले पैदलै हिँडेर जाने विचार गरिन् । पक्की बाटो भनेर के गर्नु बाटोमा निक्कै खाल्डा खुल्डी थिए । उनी मनमा अनेक कुरा सोच्दै हिँडिरहेको बेलामा पछाडि वाट एउटा मोटरसाइकल हुइँकिँदै आयो र अर्को साइडमा ठाउँ भए पनि उनी नजिकैको बाटो भएर पुरै हिलो छ्यापिदियो ।
उनी हिलो पानीले निथ्रुक्क भइन् र भनिन् ,-“अलि विचार गरेर चलाउनुपर्छ नि भाइ ।” उसले जङ्गिदै भन्यो , -“कान पनि छैनन् कि क्या हो ,सिधै माथी जाने बिचार छ ? मोटरसाइकलको आवाज सुनेर बाटो छोड्नु पर्दैन ? “यो सुनेर उनी अक्क न बक्क भइन् । मास्क लगाएको रेनकोट ओढेको हेल्मेटले टाउको पुरै ढाकिएको मान्छेको अनुहार पहिचान गर्न गाह्रो थियो । उसको पाराले उनी जिल्ल परिन् । दोबारा बोलौँ भने आजभोलिका जवान केटा उम्लिएको रगत उल्टो पछाडिबाट हान्न के बेर भनेर चुपचाप हिँडिरहिन् ।
उनी माइतीघर नपुग्दै बाटोमा एकान्त ठाउँमा एकजना युबा बिजुलीको पोल नजिकै घोप्टो परेको अबस्थामा देखियो। उसलाई ऊ आफै चढेको मोटर साइकलले अठ्याइ रहेको थियो। अनुहार रगतले पोतिएर न चिनिने अबस्थामा थियो। यो दृश्य देखेर उनी झस्कीईन्।बिचरा के कामले हिडेको थियो भन्दै उठाउन गईन् । उनलाई भाइको झल्को आयो। हत्त नपत्त मोटरसाईकल उता पल्टाईदिएर उसलाई सजिलोगरि सुताइन्। दुर्घटना जटिल थियो । घाइते पीडाले छटपटाइरहेको थियो ।
सुलोचनाले बाबाको जन्मदिन भन्दा घाइतेको उपचारलाई प्रथमिकतामा राखेर तुरुन्तै एम्बुलेन्स बोलाएर हस्पिटल लगिन् । नाक र मुखबाट अत्यधिक रक्तस्राब भएकोले डाक्टरले भने, -“धन्न बेलैमाथी ल्याउनु भयो एक छिन ढिलो भएको भए भन्न सकिन्थेन।” जतिसक्यो छिटो उस्को उपचार शुरु गरि धेरै ठाउॅमा सोधी खोजी गरेर परिवारजनको जिम्मा लगाइन्।
उनी हिँड्ने बेलामा त्यो युवकले पुलुक्क आँखा हेर्यो र हात समाउॅदै भन्यो, -“आन्टी मलाई माफ गर्नुहोस् ! हिलोका बदलामा हजुरले मलाई जीवनदान दिनुभयो ।”
काठमाडौं । विभिन्न देशका सांसदहरुको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्जालको बोर्ड सदस्यमा नेपालका सांसद गगनकुमार थापा
काठमाडौं । पद्मश्री साधना सम्मान–२०७७ बाट यस वर्ष भजन शिरोमणि भक्तराज आचार्य सम्मानित
जेठानलाई मन्त्री नचढाई, मुद्दा जितिन्छ नठान !
श्रीमान उहाँको ज्वाईं उहाँ श्रीमानको जेठान जेठानलाई मन्त्री नचढाई मुद्दा जितिन्छ नठान !
काठमाडौं । पूर्वयुवराज्ञी हिमानी शाहले राष्ट्रलाई कसरी अघि बढाउने भनेर एकपटक सोच्ने बेला